Ambohidahy :: Lehilahy voasambotra teo am-pilokana • AoRaha
Ambohidahy Lehilahy voasambotra teo am-pilokana
Nanao bemidina teny Ambodihady Ambohi-manarina ny polisy nanao fanamiana sivily, omaly tolakandro. Voasambotr’izy ireo teo am-pilokana ny lehilahy iray, manodidina ny 27 taona. Nentina tamina fiara tsy mataho-dalana nihazo ny biraon’ny Kaomisaria foibe, etsy Tsaralalàna izy avy eo.
Nisafidy ny tsy nanome fanazavana momba ny anton’io fisamborana teny Ambohimanarina io ny avy ao amin’ny Sampana misahana ny serasera eo anivon’ny Polisim-pirenena (Sicri) noho ny tsiambaratelon’ny fanadihadiana.
Heverina ho efa azo sy fantatra mialoha ny vaovao momba ny fisian’ilay lehilahy nosamborina. Tsy nanao fanamiana maha mpitandro filaminana ireo polisy tonga teny an-toerana. Tsy nisy ny fampiasana fitaovam-piadiana fa noraisim-potsiny teo am-pilalaovana karatra ilay lehilahy. Nifanontany ny zava-misy sy ny antony mety nitondran’ny polisy an’io lehilahy io ny olona teny an-toerana. Andrasana ny tohin’ny fanadihadiana.